Qoorqoor oo ugu danbeyn ka baxay aamusnaanta | KEYDMEDIA ONLINE
Wuxuu hoosta ka xariiqay in Galmudug ay diyaar u tahay in ay dhageysato qof kasta oo degaanka ah oo tabasho qaba, isla-markaana aysan marnaba aqbali doonin in koox hubeysan ay qori caaraddiis ku doonaan burburinta iyo kala dhantaalidda Galmudug.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya – Madaxweynaha Dowlad goboleedka Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye, [Qoorqoor] ayaa markii ugu horreysay dagaalka degmada Guriceel ka hadlay, kadib shir jaraa’id uu dhawaan ku qabtay xarunta Maamulka ee Dhuusamareeb.
Madaxweyne Qooqoor, ayaa muujiyay sida uu uga xunyahay dhibaatada ka dhalatay duullaanka ay Kooxda hubeysan ee ASWJ, ka qabsadeen Guriceel billowgii bishaan, isla-makaana ay ku kala raacdeeyeen maamulkii degmada, taas oo sababtay in dagaal maalintii 4-aad galay uu ka holcayo magaaladaan ganacsiga u saaxiibka ah.
Qoorqoor, wuxuu ku dhawaaqay guddi ka kooban heer wasiirro iyo maamulka degmada, oo ka shaqeynaya, taakuleynta dadka danyarta ah ee ka qaxay guryahooda, wuxuuna guud ahaan shacabka reer Galmudug dal iyo dibadba, DF iyo Beesha Caalamka uu ugu baaqay in ay gargaar deg deg ah la gaaraan hooyooyinka iyo carruurta guryahooda laga qixiyay.
Wuxuu maamulayaasha goobaha caafimaadka faray in ay si wadajir ah u dabiibaan dhaawacyada, kadib markii qaar ka mid ah masuuliyiinta degmooyinka gobolka ay isbitaallada ka mamnuuceen in la daaweeyo dhaawacyada Kooxda ASWJ, ee dagaalka kula jirta Ciidamada Dowladda iyo kuwa maamulka Galmudug.
MW Galmudug, wuxuu xusay in 22 maalin oo ASWJ, ka talinayeen Guriceel dagaalka ka hor, uu maamulkiisu isku dayay in ay hoggaanka kooxda ku qanciyaan in aciidamada ka saaraan magaalada, una ogollaadaan in maamulkii degmada dib u soo laabto, wixii tabasho ay qabanna miiska wadahadalka la yimaadaan, hayeeshee, taasi ka suura-gali weysay Sheekh Shaakir iyo kooxdiisa.
“Markii aaan aragnay in kooxda duullaanka ah aysan joogsaneyn oo ay degaanno hor leh doonayaan in ay qabsadaan, Galmudug waxa ay ku qasbanaatay in ay is difaacdo, taasna dowladdu dhacabkeeda ayay ku matashaa, sababtoo ah, kooxdaas waxa ay duullaan ku tahay dowladnimada, nabadda, cadaaladda, sharciga iyo wadajirka Galmudug”. Ayuu yiri Qoorqoor.
Qoorqoor, wuxuu wax laga xumaado ku tilmaamay in ay jiraan Maamullo, Shaqsiyaad Soomaali iyo ajaanib isku jira ay ASWJ, garab ku siinayaan burburinta Galmudug, taas oo loo fasirtay hoggaanka maamulka Puntland, oo Sheekh Shaakir uu hore ugu mahad celiyay garab istaagga ay u sameeyeen.
“Waxaan la soconnaa dhinacyo gadaal ka taagan dhibaatada Guriceel ka socota, oo gacan siinaya kooxda soo duushay, oo Soomaali iyo ajanabi leh, aad ayaan uga xunnahay in 2021, aan aragno dad sidaas u fakaraya, kana shaqeynaya dhibaatada dad iyo dowlad goboleed walaalahood ah, caddeymaheeda ayaan heynaa waana soo bagdhigeynaa”. Ayuu yiri Qoorqoor.
Ugu danbeyn bulshada reer Galmudug ayuu ugu baaqay in ay gacmaha is qabsadaan.